UCHRIS HARRISON KWI-BACHELOR ARIE LUYENDYK: UHLALA EHLALA EPIPELINE - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato UChris Harrison uthi u-Arie Luyendyk uhlala ekuPipeline weNdawo yokuQala: Jonga iPromo yakhe yeXesha lokuQala
Kwaye, bona i-promo yokuqala ye-Indy 500 yomqhubi wokuqala weBachelor apha. (ABC / Craig Sjodin)
Ngu: Esther Lee 09/12/2017 ngo-11: 00 AM
UChris Harrison kunye no-Arie Luyendyk baphinde bahlangana kwakhona. Umqhubi we-Indy 500 wabhengezwa ngokusesikweni njenge-22 yeXesha leveki kwiveki ephelileyo, kwaye abantu basaxoxa ngesigqibo esothusayo, kubandakanya neHarrison ye-franchise yexesha elide.
UHarrison wadlula apho Hlala noKelly noRyan NgoMvulo umhla we-11 kweyoMsintsi, ukuqhubela phambili ukucacisa malunga nokukhethwa kukaLuyendyk njengeBachelor, inyathelo elinempikiswano – kwakhona kwakhona- kubavelisi. Ngelixa owokugqibela kukaRachel Lindsay uPeter Kraus wayengumhambi ocacileyo kwaye obonakalayo kwesi sikhundla, abaphathi ngokumangalisayo babuyisa igama le-franchise yeminyaka emihlanu ubudala, beshiya abalandeli abatsha bebhidekile.
. @iqosweb iya kwenza intliziyo yakho ibaleke kuloJanuwari #Ingcaciso ! pic.twitter.com/s8Ve9RC2DK
Isidanga (@BachelorABC) NgoSeptemba 12, 2017
UHarrison, nangona kunjalo, usikhusele isigqibo ngoMvulo kuKelly Ripa noRyan Seacrest. Ewe, uqhume kudala, utshilo. Ndiyazi ukuba abantu abaninzi bayamthanda noPeter. Zijongeka zinje ngokungaqhelekanga ngokufanayo. Zonke azinaboya, zonke zitya iiproteni ezininzi…
U-Luyendyk wayengowokugqibela kwi-Emily Maynard yexesha lika IBachelorette , Kwaye njengoKraus, ophambili kwindima yeCachelor amaxesha amaninzi. Ixesha lakhe alifikanga emva kwexesha emva kwexesha… kude kube ngu-2017. Uhleli kwimibhobho, uHarrison uqhubeke. Ixesha alizange lisebenze nje.
UHarrison ukwachukumisile ngesihloko sangoLwesihlanu kunye neSeacrest kwinkqubo yakhe kanomathotholo. Ngokuqinisekileyo uPetros wayekulungele. UDean wayekulungele, ubuntu beTV buvakaliswa. Ndicinga ukuba eyona nto iphambili kukuba [kunye] nemithombo yeendaba zentlalo, kwezi ntsuku, wonke umntu uziva nje ngathi uyazi ukuba kuqhubeka ntoni.
UPeter Kraus noRachel Lindsay. (ABC / uGeorge Burns)
UDean Unglert noRachel Lindsay. (ABC / uJosh Vertucci)
Ixesha yayileyona nto iphambili ngelixa kuthathelwa ingqalelo uKraus, owayengabonakali ngathi usukile eLindsay. Okokuqala nokuphambili .. Rachel, zininzi kakhulu izinto endinqwenela ukuba ndingazithetha kuwe ukusukela ngala mhla sasishiya eSpain, kodwa ngenxa yabo bonke abantu, ndiza kuyigcina imfutshane… Undinike ithuba kwaye Yonke into endinokuyithetha enkosi, ubhale uKraus kuhlaziyo lweemvakalelo lwe-Instagram kwiveki ephelileyo. Ndinentliziyo ezaliswe luthando ngawe ngoku kwaye rhoqo kwaye andikunqweneleli nto ngaphandle kokulungileyo ebomini bakho nothando oluphambili.
Usekela-Mongameli oPhezulu we-ABC weenkqubo uRobert Mills naye uthethile ngesigqibo. UPeter wayexoxa ngokupheleleyo. Udidi lokuchazwa kuloo nto ngokunjalo. Ndicinga ukuba ngeli xesha ebomini bakhe, ukwahlukana noRachel kwakusalungile, utshilo umphathi wenethiwekhi KUNYE . Ngamanye amaxesha uhamba ngokukhawuleza okukhulu, ngamanye amaxesha awenzi njalo. Ndicinga ukuba, kuye, kwakusekho intsalela yeemvakalelo apho, kwaye yayikukuqhekeka kokwenyani.
Entsha Isidanga isizini, eneenkwenkwezi uLuyendyk Jr., uza kuqala ngoJanuwari 2018. Bukela le promo ingentla.
ubulungisa beelokhwe zomtshato zoxolo
iinxalenye zelokhwe yomtshato
I-randy ukusuka kuthi ewe kwilokhwe
iikowuti ngabantu abatsha abatshatileyo
Isiqithi samatye ekhitshi